Imifanekiso eqingqiweyo eyiyo kaJacopo, igcisa elizifundisayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso eqingqiweyo yokwenene yalo mzobi uzifundisayo
Ukuzifundisa ngokwakho kufuna uninzi umnqweno, unyamezelo kunye nomdla wokufunda wawo nawuphi na umcimbi wobugcisa. Inokusetyenziswa kuzo zonke izakhono umntu anokuzifumana ebomini kwaye ayikho enye into ngaphandle kokuqhubeka nayo. Amaxesha amaninzi asiyiqondi nemikhwa esiyifumanayo yokuzixhobisa ngolwazi oluyimfuneko lokusebenzisa zonke iintlobo zobuchule.
Into eyenzekayo kuJago Jacopo Cardillo, a ozifundisayo oqingqayo ongoyena mzekelo wokugqibela wento esele ithethiwe ukuza kuthi ga ngoku. Sithetha ngomzobi wase-Italiya okwazi ukuguqula imarble namatye abe ziingceba ezintsonkothileyo ezinokukwazi ukuzenzela ubomi babo xa siphambi komntu othanda umsebenzi walo mkroli.
Ukusukela ebuntwaneni, uJacopo wayenomdla kubugcisa kwaye ngakumbi ngakumbi UMichelangelo, umakhi wase-Italiya, umkroli kunye nomzobi I-Renaissance ithathwa njengelinye lamagcisa amakhulu kwimbali yoluntu; le mifanekiso ibonisa ubuhlakani bomzobi.
Elinye lamaphupha kaJacopo lalinjalo ube yinto efanayo yanamhlanje Umkroli, kwaye kwinto esinokuyibona kwimisebenzi yakhe yobugcisa ngendlela yemifanekiso eqingqiweyo, ukwindlela elungileyo.
Umsebenzi oqingqiweyo apho ibeka ugxininiso olukhethekileyo kwiinkcukacha kunye nokuchaneka. Imifanekiso yakhe eqingqiweyo iyakwazi ukunikwa ubunyani obukhulu, njengoko kubonisiwe yimifanekiso ebonelelweyo, kwangaxeshanye ukuba nefuthe kwiimvakalelo zondwendwe ukuba zimangaliswe.
Imizimba ye imifanekiso eqingqiweyo izele bubuntu kwaye loo mibimbi ebonisa ukugqitha kweminyaka. Njengezandla apho iintanda zolusu zenza imibimbi yezinto ebeziphila.
UJacopo uye I-instagram yakhe yantoni unokulandela nganye yeeprojekthi ezintsha apho ifakwe emanzini, kwaye iwebhusayithi yakho ukufumana imiboniso kunye nokunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo yokwenene yalo mzobi uzifundisayo
Umbhalo wesandla we-voynich, incwadi enqabileyo enemifanekiso ehlabathini
Iindlela ezili-10 zohlobo lwe-2018 esingafanele sizishiye ngasemva